Emergency Public Health Response
Occupation and Environmnetal Health
Central Epidemiology Unit
Health Management and Information System
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ရေးဆွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အီလက်ထရောနစ် ရုံးစာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အပေါ် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအကြံပြုနိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
နေပြည်တော်၊ (၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂၃)ရက်
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ရေးဆွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အီလက်ထရောနစ် ရုံးစာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (Electronic In-house memo transmission system –ememorandum system) အပေါ် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း အကြံပြုနိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို၊ ယနေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၄၇) ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (စီမံ/ဘဏ္ဍာ) ဒေါ်အေးအေးစိန်က ဝန်ကြီးဌာန၏ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသော e-Health နှင့် e-Government လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံ/ဘဏ္ဍာဌာနခွဲမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာမေနွယ်စိုးက e-Memorandum System ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသေးစိတ် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ရာ အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများက ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးအကြံပြုခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ e-Government လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဝန်ကြီးရုံးနှင့် ဦးစီးဌာနများမှ လက်ထောက်အတွင်းဝန်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဦးစီးအရာရှိများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
Author: CMSAdmin Last modified on Thursday, 07 Nov 19
This is official webpage of Public Health. Daily news, events in DOPH are posted in this page. If you want to know detail about DOPH, please also visit to www.doph.gov.mm
Office No.47, Nay Pyi Taw, Myanmar